सिरियामा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतको आक्रमण, कसले के भने ? - Everest Dainik - News from Nepal
सिरियामा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतको आक्रमण, कसले के भने ?
काठमाडाैं । यो हमला झण्डै एक वर्षअघि सिरियाको हवाई अड्डामा अमेरिकी हमला भन्दा उल्लेखनीय थियो तर प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ भन्दा हमला निकै सीमित छ।
रक्षामन्त्री गेभिन विलियम्सनका अनुसार उक्त हमलामा ब्रिटेनको भूमिका सानो देखिन सक्छ तर यो संयुक्त प्रयासले राष्ट्रपति असदलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
गत साता डुमामा सिरियाली पक्षले गरेको भनिएको रासायनिक अस्त्रको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै टर्कीले ब्रिटेन, अमेरिका र फ्रान्सले चालेको कदमले “मानवीय चेतनालाई सहज” तुल्याएको टिप्पणी गरेको छ।
अंकाराका दृष्टिमा डुमामा सर्वसाधारणविरुद्ध भएको आक्रमण “मानवताविरुद्धको अपराध” सरह थियो र त्यसलाई दण्डित गर्नै पर्छ भन्ने उनको अडान छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये तीन मुलुक अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले आक्रमण गरेका विवरणहरूलाई नियालिरहेको बताएका छन्।
उनले ‘राष्ट्रसंघीय बडापत्र तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कदम चाल्न’ उनीहरू जिम्मेवार रहेको बताए।
गुटेरसले थपे, “अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सुरक्षा परिषद्को प्राथमिक जिम्मेवारी हो। म परिषद्का सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई एकढिक्का हुन र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु।”
“म सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो खतरनाक स्थितिमा संयम अपनाउन र त्यहाँको स्थिति तथा सिरियाली जनताको पीडालाई झन् बिगार्न सक्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्दछु।” बीबीसी